2019 HPA ဆုပေးပွဲအတွက် Creative အမျိုးအစားအမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ကြေညာလိုက်သည် 2019 HPA ဆုပေးပွဲအဘို့ကို Creative Category: လျာထားစာရင်း
ကြေညာလိုက်သည် 2019 HPA ဆုပေးပွဲအဘို့ကို Creative Category: လျာထားစာရင်း
အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲကော်မတီ 2019 HPA ဆုပေးပွဲများအတွက်ဖန်တီးမှုအမျိုးအစားများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဖန်တီးမှုထူးချွန်နှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်စံဆောင်လုလင်သည် HPA ဆုပေးပွဲဘဝမှပုံပြင်များဆောင်ကြဉ်းကူညီသူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့များအားဖြင့်ထူးချွန်အောင်မြင်မှုနှင့်အနုပညာထူးချွန်ဂုဏ်အသရေ။
2006 အတွက်ဖြန့်ချိခြင်း, HPA ဆုပေးပွဲ Episode, အစက်အပြောက်အတွက်အလုပ်အတွက်ထူးချွန်အရောင်တန်းကျောင်းသူအောင်မြင်မှု, တည်းဖြတ်, အသံများနှင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ရုပ်ရှင်ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ 14 ၏ဆုရရှိသူth နှစ်ပတ်လည် HPA ဆုပေးပွဲအတွက် 21 အပေါ်တစ်ဦး Gala အခမ်းအနားတွင်ကြေညာခဲ့သည်လိမ့်မည်st အတွက် Skirball ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ၌နိုဝင်ဘာလ 2019 ၏ Los Angeles မြို့, CA.
အဆိုပါ 2019 HPA ဆုပေးပွဲကို Creative အမျိုးအစားဆန်ခါတင်နေသောခေါင်းစဉ်:
စတီဗင်ဂျေဖြစ်သူ Scott // Technicolor
"ဒီ Nutcracker နှင့်လေးဘုံ"
တွမ်ရေကူးကန် // ကုမ္ပဏီ 3
မိုက်ကယ် Hatzer // Technicolor
"Spider-Man: အ Spider-အခနျးငယျထဲသို့"
ထူးချွန်အရောင်တန်း - Episode သို့မဟုတ် Non-ပြဇာတ် Feature ကို
"ကြှနျမရဲ့ပုံပြင် - Liars"
ဘီလ် Ferwerda // Deluxe တိုရွန်တို
"ဒီအံ့ဖွယ်မစ္စစ် Maisel - ကနေဒီအတှကျကနေဒီ, Vote များအတွက် Vote"
စတီဗင် Bodner // အလင်းသံ
"Thrones ၏ဂိမ်း - Winterfell"
ဂျိုး Finley // Sim, Los Angeles မြို့
"ငါညဖြစ်၏ - ရှေ့ပြေး"
Stefan Sonnenfeld // ကုမ္ပဏီ 3
"Gotham - ထို Dark Knight ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ: ဂျင်မ်ဂေါ်ဒွန်၏စမ်းသပ်"
ရှင်ပေါလု Westerbeck // ရုပ်ပုံဆိုင်
"ဒီအမြင့် Castle အတွက်က Man - Jahr Null"
ရွိုင်း Vasich // Technicolor
Zara - "အမျိုးသမီးကင်ပိန်းနွေဦးသည်နွေရာသီ 2019"
တိ Masick // ကုမ္ပဏီ 3
Tiffany & Co - "အိပ်မက်များကိုယုံကြည်: တစ်ဦးက Tiffany အားလပ်ရက်"
ရုပ်ပုံကုမ္ပဏီ Moving ဂျိမ်း Tillett //
Hennessy XO - "အဆိုပါခုနစ်လောက"
စတီဖင် Nakamura // ကုမ္ပဏီ 3
စွန်ပလွံကာစီနို - "Unstatus Quo"
ရုပ်ပုံကုမ္ပဏီ Moving ရစ်ကီ Gausis //
Audi ကား - "Cashew"
တို့ကကမကထပြု Blackmagic ဒီဇိုင်း
"ပြီးတာနဲ့တစ်ဦးအချိန်အခါ ... အတွက် ဟောလိဝုဒ်"
Fred သည် Raskin, ACE အား
ပက်ထရစ်ဂျေဒွန် Vito, ACE အား
"Rolling Thunder Revue: မာတင်ကျွန်တော်ဇာတ်ကားအားဖြင့်တစ်ဦးဟာ Bob Dylan ပုံပြင်"
ဒါဝိဒ်သည် Tedeschi, Damian Rodriguez
Orson Welles, ဘော့ Murawski, ACE အား
ဂျေး Cassidy, ACE အား
ထူးချွန်တည်းဖြတ် - Episode သို့မဟုတ် Non-ပြဇာတ် Feature ကို (30 မိနစ်နှင့်လက်အောက်တွင်)
"ရုရှား Doll - အဆိုပါလမ်းထဲက"
"Homecoming - ရက်ဒ်ဝု"
Rosanne Tan က ACE အား
"VEEP - Pledge"
ရော်ဂျာ Nygard, ACE အား
Jake မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်, Shannon Albrink // ကုထုံးစတူဒီယို
"ရုရှား Doll - Ariadne"
ထူးချွန်တည်းဖြတ် - (30 မိနစ်ကျော်) Episode သို့မဟုတ် Non-ပြဇာတ် Feature ကို
"သူစိမျးအရာ - အခန်းရှစ်: Starcourt ၏တိုက်ပွဲ"
ဒင်း Zimmerman, ACE အား, Katheryn Naranjo
"ချာနိုဘိုင်း - Vichnaya Pamyat"
ရှိမုနျကိုစမစ်, Jinx Godfrey // ညီအစ်မရုပ်ပုံများ
"Thrones ၏ဂိမ်း - The Iron ပလ္လင်"
ကေတီ Weiland, ACE အား
"Thrones ၏ဂိမ်း - အ Long ကည"
တိပေါ်တာ ACE အား
"ဒီသက်တော်စောင့် - အပိုင်းတစ်ခုမှာ"
ထူးချွန်အသံ - ပြဇာတ် Feature ကို
"Godzilla: Monsters ဘုရင်"
တိ LeBlanc, တွမ် Ozanich, MPSE // Warner Bros.
Erik Aadahl, MPSE, နန်စီ Nugent, MPSE, Jason ဒဗလျူ Jennings // အီး Squared
မိုက်ကယ် Keller, ကီဗင် O'Connell // Warner Bros.
ဘီလ် R. မဟာဌာနမှူး, MPSE, အဲရ Ocampo, ကယ်လီအောက်စဖို့, MPSE // Technicolor
မိုက်ကယ် Babcock, ဒါဝိဒ်သည်အီး Fluhr, CAS, Jeff Sawyer ခရစ် Diebold, Harrison Meyle // Warner Bros.
Lievsay, ဆာဂျီယို Diaz, Craig Henighan, ကားလို့စ် Honc, Ruy Garcia က, MPSE ကာလကျ Townsend Skip
တိ LeBlanc // Warner Bros.
ပတေရုသဘရောင်း, ဂျိုး Dzuban, စတီဖင်ပီရော်ဘင်ဆင်, MPSE, Eliot Connor, MPSE // Formosa အုပ်စု
ထူးချွန်အသံ - Episode သို့မဟုတ် Non-ပြဇာတ် Feature ကို
"ချာနိုဘိုင်း - 1: 23: 45"
Stefan Henrix, Stuart Hilliker, ဂျိုး Beal မိုက်ကယ် Maroussas ဟယ်ရီ Barnes // Boom Post ကို
ယောဟနျသဒဗလျူကွတ် II ကိုဘီလ် Freesh, ကထပ်လောင်းဆောင်းရာသီ, MPSE, ဒံယေလ Colman, MPSE, ဘင်ကွတ်, MPSE, Micha Liberman // အား NBC Universal
"Thrones ၏ဂိမ်း - အဆိုပါခေါင်းလောင်း"
တိ Kimmel, MPSE, Onnalee Blank က, CAS, Mathew ရေ, CAS, Paula ဖဲရ်ဖီးလ်, ဒါဝိဒ်သည် Klotz
"ဟေးလ်အိမ်၏သရဲခြောက် - နှစ်ဦးမုန်တိုင်း"
Trevor Gates က MPSE, Jason Dotts, ယောနသန်သည်ဝေလနယ်, ပေါလု Knox, ဝေါလ်တာ Spencer // Formosa အုပ်စု
"Homecoming - ပရိုတိုကော"
ယောဟနျသဒဗလျူကွတ် II ကိုဘီလ် Freesh, ကီဗင် Buchholz, Jeff အေ Pitt, ဘင် Zales, Polly McKinnon // အား NBC Universal
ယောဟနျသ Lewis က & Partners - "Bohemian Rhapsody"
မာကု Hills မှာအန်သိုနီ Moore က // စက်ရုံ
Audi ကား - "ဘဝ"
Doobie အဖြူရောင် // ကုထုံးစတူဒီယို
Leonard Cheshire မသန်စွမ်းသူများ - "အတူတကွကိုလညျးမတားဆီး"
မာကုတောင်ကုန်း // စက်ရုံ
New York Times ကို - "အမှန်တရားဒါဟာ Worth Is: အကြောက်ကင်း"
အာရုန်သည် Reynolds က // Wave ကို Studios ကနယူးယော့
ယောဟနျသ Lewis က & အပေါင်းအဖေါ်များ - "အဲဒီ Boy နှင့်စန္ဒယား"
အန်သိုနီ Moore က // စက်ရုံ
Matt Aitken, Marvyn လူငယ်တို့, Sidney Kombo-Kintombo, Sean Walker က, ဒါဝိဒ်သည် Conley // Weta ဒီဂျစ်တယ်
"Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ. "
Alexis Wajsbrot, Sylvain Degrotte သန် McConnell, စတီဖင်ကနေဒီ, ယောနသန်သည် Opgenhaffen // Framestore
အင်ဒရူး R. ဂျုံးစ်
အာဒံကို Valdez, Elliot Newman က, ခြေ Ferrara // MPC ကရုပ်ရှင်ပွဲတော်
တွမ် Peitzman // T က & C က Productions
အဲရစ် Saindon မိုက်ကယ် Cozens, Dejan Momcilovic, မာကု Haenga, ကီဗင် Sherwood // Weta ဒီဂျစ်တယ်
"Pokemon စုံထောက် Pikachu"
ယောနသန်သည် Fawkner, ကားလို့စ် Monzon, Gavin McKenzie, Fabio Zangla, Dale နယူတန် // Framestore
(13 ဇာတ်လမ်းတွဲများလက်အောက်တွင်) Episode သို့မဟုတ် Non-ပြဇာတ် Feature ကို - ထူးချွန် Visual Effects
မာတင်ဟေးလ်, Nicky muir, Mike Perry, မာကု Richardson က Darren Christie // Weta ဒီဂျစ်တယ်
"ဒီ Umbrella အကယ်ဒမီ - အဆိုပါ White ကတယော"
Everett Burrell, Misato Shinohara, Chris White, Jeff ကမ့်ဘဲလ်, Sebastien Bergeron
"ဟုအဆိုပါအဆင့်မြင့်ရဲတိုက်၌က Man - Jahr Null"
Lawson Deming, Cory Jamieson, Casi Blume နစ်ခ်ချိန်ဘာလိန်ဝီလျံက Parker, ဖုံးကိုဓားရှည် Jlassi ခရစ်ပန်းခြံ // Barnstorm VFX
မက်စ် Dennison, Clare Cheetham, စတီဗင် Godfrey, လုကာ Letkey // DNEG
စတိဗ် Kullback, ဂျိုး Bauer, Ted Rae
Mohsen မူဆာဗီ // Scanline
သောမတ်စ် Schelesny // Image ကိုအင်ဂျင်
ထူးချွန် Visual Effects - Episode (13 ဇာတ်လမ်းတွဲများကျော်)
"ဟာဝိုင်ယီကျွန်းငါးခုအို - Ke iho mai nei ko luna"
သောမတ်စ် Connor, Anthony Davis ကချဒ် Schott, ဂယ်ရီလိုပက်ဇ်, အာဒံ Avitabile // ရုပ်ပုံဆိုင်
Jon Massey, တိုနီ Pizadeh, ဂျစ် Bourque, Gavin Whelan, Kwon Choi // FuseFX
"Star Trek: Discovery - ဤသို့သောအမွှေးအဝမ်းနည်းခြင်းအပိုင်း2"
ဂျေဆန် Zimmerman, အောက်ဖော်ပြပါများမှ Dekovic, Aleksandra Kochoska, ချားလ်စ် Collyer အလက်ဇန္ဒား Wood က // ဖြစ်သော CBS ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို
"ဒီ Flash ကို - ဂေါ်ရီလာ Grodd vs. မင်းကြီးသည်ငါးမန်း"
Armen V. Kevorkian, ယောရှု Spivack, Andranik Taranyan, Shirak Agresta, Jason Shulman // Encore VFX
"ဒီ Orville - အထောက်အထား: အပိုင်း II ကို"
Tommy Tran, ကီဗင် Lingenfelser ယောသပ်သည်ဗင်းဆင့်ပိုက် // FuseFX
Brandon Fayette, Brooke Noska // နှစ်ဆယ်ရာစု FOX တီဗီ
ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်သည့်အဆိုပြုချက်များအပြင်၌, HPA ဆုပေးပွဲအထူးဆု၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကတင်ပြ။ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အစောပိုင်းက, ဒဏ္ဍာရီအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့်ကျော်ကြားဖန်တီးမှုရောဘတ် Legato (အဖြစ်ခြင်္သေ့ဘုရင်, အဆိုပါ Aviation, ဟူဂို, ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်မျှောဆရာရဲ့ကျောက်စာ, တိုက်တန်းနစ်, avatar) တစ်သက်တာအောင်မြင်မှုများအတွက် HPA ဆုချီးမြှင့်ခံရလိမ့်မည်။ အဆိုပါ coveted အင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကို၏ဆုရရှိသူအစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့် Adobe က, က Epic Games, Pixelworks, Portrait display, Inc ကိုနှင့် LG အီလက်ထရောနစ်ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ တီထွင်ဖန်တီးနှင့်အင်ဂျင်နီယာများအတွက်တရားသူကြီးမှတ်စာ Award ဆုတစ်ဂျူရီဂုဏ်အသရေ၏လက်ခံရရှိသူ, လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးဆုသည့် HPA ဆုပေးပွဲ Gala မှာ၏အကြောင်းလိမ့်မည်။
အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲ Gala အခမ်းအနားသို့တစ်ဦးကိုရောင်းထုတ်ကိစ္စဖြစ်ပြီးအစောပိုင်းလက်မှတ်ဝယ်ယူအားပေးတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲများအတွက်လက်မှတ်များကိုယခု, အွန်လိုင်းမှာရောင်းချနေကြသည် www.hpaonline.com သို့မဟုတ် + 1 (818) 273-1482 ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်။ စပွန်ဆာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်မှာ Joyce Cataldo ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected].
အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဟောလိဝုဒ် Professional ကအစည်းအရုံးမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.hpaonline.com။ အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲစိန်ခေါင်းစဉ်စပွန်ဆာများ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူရာအရပ်ကိုယူ Blackmagic ဒီဇိုင်း, ပလက်တီနမ်စပွန်ဆာ IMAX; ကြေးဝါ Fox က Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများစပွန်ဆာ; supporting စပွန်ဆာ DTS, EFilm, FuseFX, ရုပ်ပုံဆိုင်နှင့် Pixelogic; နှင့်ကြယ်ပွင့် Signiant စပွန်ဆာ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ဖားအံဆု post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - အသံက လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ Visual Effects 2019-10-01
ယခင်: အဆိုပါ StreamGeek ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနယူးယောက်မြို့မှခေါင်းနှစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်